တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သမ်မတ H.E.Mr. Xi Jinping တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျနှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေး » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
ဇနျနဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၂၀ ဇှနျ ၂၊ ၂၀၂၀
နပွေညျတျော၊ ဇနျနဝါရီ – ၁၈
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျအနဖွေငျ့ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သမ်မတ Mr. Xi Jinping နှငျ့ ယခုအကွိမျတှဆေုံ့ဆှေးနှေးမှု သညျ ၆ ကွိမျမွောကျဖွဈပွီး တှဆေုံ့ခြိနျမြားတှငျ နှဈနိုငျငံနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးစှာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား တိုးတကျကောငျးမှနျ အောငျ ဆောငျရှကျနိုငျ မညျ့ ကိစ်စရပျမြားအား ဆှေးနှေးနိုငျခဲ့သညျ။
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ – ၁၈
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသည့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ H.E.Mr. Xi Jinping သည် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ Horizon Lake View Resort Hotel ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ တွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာများအား ဆွေးနွေးသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်နှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတနှင့်အတူ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr. Ding Xuexiang ၊မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mr. Chen Hai နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဧည့်သည်တော် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတက ယခုကဲ့သို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ထပ်မံတွေ့ဆုံရခြင်းအတွက် ဝမ်းမြောက်ပါကြောင်းနှင့် မိမိ၏ ယခုခရီးစဉ်သည် အောင်မြင်သည့် ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါကြောင်း၊ ၁၉ နှစ်တာ ကာလအတွင်း တရုတ်ပြည် သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတတစ်ဦး၏ ခရီးစဉ်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ မိမိမှ သမ္မတ တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်တွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၏ ပထမ ဦးဆုံးပြည်ပ ခရီးစဉ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်ရခြင်းသည် တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး တိုးတက်ခိုင်မာ လျက်ရှိသည်ကို ဖော်ပြခြင်းပင်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုကို ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် တွန်းအားပေးလိုပြီး နှစ်နိုင်ငံ အေးအတူပူအမျှဖြစ်သည့် အသိုက် အဝန်းကို ထူထောင်ရန်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် နှစ်နိုင်ငံပြည်သူလူထုချင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုနှင့် တပ်မတော်ချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော် နှစ်ရပ်အကြား ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်လျက်ရှိကြောင်း၊ နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် နှစ်နိုင်ငံအေးအတူပူအမျှဖြစ်သည့် အသိုက်အဝန်းကို ပိုမိုအထောက် အကူဖြစ်စေနိုင်ပြီး နှစ်နိုင်ငံပြည်သူလူထုများအတွက် ပိုမိုများပြားသည့် အကျိုးစီးပွားကို ဖန်တီးပေးနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ပြန်လည်ပြောကြားရာတွင် အဆွေတော် သမ္မတကြီး အနေဖြင့် သမ္မတ အဖြစ်တာဝန်ယူပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်နှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အတွင်း ပထမဆုံးပြည်ပ ခရီးစဉ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခြင်းသည် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကို အလေးအနက်ထားကြောင်း ဖော်ပြနေပါကြောင်း၊ မိမိတို့ နှစ်နိုင်ငံသည် အိမ်နီးချင်းကောင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်းနှင့် မဟာဗျူဟာ မိတ်ဖက် နိုင်ငံများဖြစ်သည့်အတွက် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးသည် ပိုမိုလေးနက်မှုရှိပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူလူထု၊ အစိုးရနှင့် နိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတို့တွင် ပိုမိုလေးနက် နက်ရှိုင်းစွာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆွေတော် သမ္မတကြီး၏ နှစ်နိုင်ငံအေးအတူပူအမျှ အသိုက်အဝန်းတည်ထောင်ရေးအဆိုကိုလည်း သဘောတူပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု ၉ နှစ်တာကာလအတွင်း အတွေ့အကြုံ များစွာရရှိခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုများရှိသလို စိန်ခေါ်မှုများလည်း ရှိနေပါကြောင်း၊ အရေးကြီးသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်မှာ နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးသည် အဓိကအရေးကြီး ပါကြောင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲများအား အစိုးရက ဥပဒေအရ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် နားလည် ထောက်ခံပါကြောင်းနှင့် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒကိုလည်း ထောက်ခံပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ တည်ငြိမ် အေးချမ်းရန်နှင့် ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ ထိန်းကျောင်းမှုသည်များစွာအရေးပါပြီး မိမိတို့နိုင်ငံတွင်လည်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိ ပါကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း တိုင်းပြည်တိုးတက်မှုမရှိပါက ပြည်သူများက ယုံကြည်နိုင်ရန် ခဲယဉ်းမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံက ဆောင်ရွက်နေသော OBOR စီမံကိန်းများတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ၊ အရင်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီးအဖျားနိုင်ငံ မဟုတ်သောကြောင့် ယင်းစီမံကိန်းများအား မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိစေသောဆောင်ရွက်ချက်များ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါက တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး ပြည်သူများစိတ်ချမ်းသာမှုရရှိကာ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းအတွက် အထောက်အကူရရှိစေနိုင်ပါကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း ဥပဒေနှင့်အညီသာ ဆောင်ရွက်ရ မည်ကို တိုင်းရင်းသားအားလုံး နားလည်လက်ခံနိုင်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အဆွေတော် သမ္မတကြီး ကလည်း တိုက်တွန်းအားပေးနိုင်ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံလိုပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရန် ဆန့်ကျင်သည့် အကြမ်း ဖက်ဆူပူမှုများကို မည်သည့်နိုင်ငံကမျှ လက်ခံနိုင်မည်မဟုတ်သလို အစိုးရကို ဆန့်ကျင်၍ လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများဆိုလျှင် ပို၍ပင် လက်ခံနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ အေးအတူပူအမျှ အသိုက်အဝန်းတည်ထောင်ရေးနှင့် ပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားများအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် တပ်မတော်က အတတ်နိုင်ဆုံး ပူးပေါင်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့် ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်ပြီး ဧည့်သည်တော်သမ္မတက တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ ဆွေးနွေးမှုများကို သဘောတူ ချီးကျူးပါကြောင်း၊ မိမိတို့ နှစ်ဦးအကြား အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဆုံ ခဲ့ပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန်နားလည်မှု၊ ယုံကြည်မှု ရရှိထားပါကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ကောင်းမွန်မှုကို အလေးထားပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဆက်ဆံရေးတွင် ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် ဆက်ဆံရေးမှာ ထူးခြားမှုရှိပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေး နှစ်ပေါင်း(၇၀)ကာလအတွင်း ဆက်ဆံရေးများ မပြောင်း လဲခဲ့ပါကြောင်း၊ မိမိ ဒုတိယသမ္မတအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် လာရောက်ခဲ့ချိန်၌ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေရကြောင်း၊ ထိုစဉ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ လမ်းပြမြေပုံ ၇ ချက်အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများကို တရုတ်နိုင်ငံက အားပေးကူညီ ထောက်ခံခဲ့ပါကြောင်း၊ ဆက်လက်၍လည်း နှစ်နိုင်ငံအကြား ကိုင်းကျွန်းမှီ-ကျွန်းကိုင်းမှီ ဆက်ဆံရေးမျိုး ထားရှိရ မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ ကိုယ်စီကျင့်သုံးနေသော နိုင်ငံရေးစနစ် မတူညီမှုများ ရှိသော်လည်း မတူညီမှုများကို အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိကာ တူညီမှုများတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင် ရေးမူကြီး ၅ ရပ်နှင့်အညီ ကျင့်သုံးလျက်ရှိပြီး အခြားနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေး ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်ခြင်းကို လက်မခံကြောင်း၊ နောင်တွင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရန်အတွက် ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရန်၊ မိုင်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော် နယ်နိမိတ် ထိစပ်လျက် ရှိသဖြင့် နယ်စပ်ဒေသဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်နိုင်ရန် အရေးကြီးကြောင်း၊ မည်သည့်အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်စေ တရုတ်နိုင်ငံပိုင်နက်ကို အသုံးချ၍ မြန်မာနိုင်ငံကို ထိခိုက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးကို လက်မခံကြောင်း၊ အများကစွပ်စွဲပြောကြားနေသလို မြန်မာနိုင်ငံရှိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကို လက်နက်၊ ခဲယမ်းများ ထောက်ပံ့ပေးနေခြင်း လုံးဝမရှိကြောင်း၊ အခြားနည်းလမ်းများနှင့် ရရှိနိုင်သည် ဖြစ်၍ မိမိတို့ကလည်း သေချာစွာစိစစ်ဖြေရှင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ နယ်ပယ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ဆက်လက်ရပ်တည်ထောက်ခံပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြောကြားရာတွင် အဆွေတော် သမ္မတကြီး၏ အကြုံပြု ဆွေးနွေးချက်များကို အလေးထားပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခက်အခဲများကို နားလည်ပြီး ရပ်တည် ထောက်ခံပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး၊ ပြည်သူ့လူထု၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်း ကာကွယ်ရေးအတွက် ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ တာဝန်ထမ်း ဆောင်နေပါကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးမူကြီး ၅ ရပ်နှင့်အညီ ဆက်ဆံဆောင်ရွက် ရေးကိုလည်း အလေးအနက်ထားလိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ကို ထပ်လောင်းပြောကြား လိုပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် တည်ငြိမ်မှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အနေဖြင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ Mr. Xi Jinping နှင့် ယခုအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု သည် ၆ ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီး တွေ့ဆုံချိန်များတွင် နှစ်နိုင်ငံနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးတက်ကောင်းမွန် အောင် ဆောင်ရွက်နိုင် မည့် ကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့သည်။